Monday January 02, 2017 - 09:50:07 in Wararka by Super Admin
AMISOM ayaa ah Calooshood u shaqeystayaal ka dagaallama Somalia
28 December 2006 ayay ciidanka gumeysiga Itoobiya qabsadeen magaalada Muqdisho iyo dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya kadib markii ay u awood sheegteen xoogagii Maxaakimta islaamka oo markii dambe burburay.
Bishii Janaayo 2007 maalmo kadib qabsashadii ciidanka Itoobiya ee magaalada caasimadda ah ayaa kumanaan katirsan ciidamada Burundi iyo Uganda lagasoo dajiyay garoonka diyaaradaha caalamiga Muqdisho iyagoo huwaan shaatiga ‘AMISOM’.
Ujeedka laga lahaa imaashiyaha ciidanka ayaa ahaa in gogol xaar ay u noqdaan gumeysi aan dhammaad laheyn oo lageliyo shacabka Soomaaliya illaa markii dambe lagaarsiiyo 23-kun askari oo qalabkoodu u dhameystiranyahay.
Joogitaanka ciidamada AMISOM oo marxalado kala duwan soo maray ayaa ugu dambeyntii sanaddii 2010 waji cusub yeeshay kadib markii ay si toos ah uga dagaal galeen magaalada Muqdisho islamarkaana ay ku dhawaaqeen in ay qabsanayaan magaalooyin iyo degmooyin sharciga islaamka lagu maamulayay.
Xarakada Al Shabaab ayaa ciidamada AMISOM ka xureysay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ciidankaasi ay difaacyo ka qoteen wadada Makka Al Mukarama illaa iyo isgoyska Jubba halkaasi oo dagaallo culus ku qabsanayeen.
AMISOM oo ah ciidan calooshood u shaqeystayaal saliibiyiin ah ayaa xasuuq daran ugeystay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho oo madaafiic ay ku rusheeyeen.
sanaddii 2011 oo dagaalka Soomaaliya ay kusoo biireen dowladaha Itoobiya,Kenya,Jabuuti iyo siiraaliyoon ayay xarakada Al Shabaab ku dhawaaqday in ay wax ka bedeshay qaab dagaaleedkeeda islamarkaana ay dagaalka u rogtay ku dhufo oo ka dhaqaaqay, qorshahaas oo cuuryaamiyay hankie soo duulayaasha shisheeye.
5,8,2011 ayay ciidamada AMISOM bilaabeen in ay isku fidiyaan degmooyinka gobolka Banaadir xilligaasi oo xarakada Al Shabaab ay joojisay dagaalladii fool ka foolka tooska ahaa ee hanaanka difaacyada.
balse 21 October 2011 ayay ciidamada Xarakada qaadeen weerar xooggan oo ka dhacay degmada Dayniile waxaana dagaalkaas lagu dilay in kabadan 70 askari Burundeys ah.
Dr. Xanafi Cabdi Sheekh oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa sheegay in toban sanadood kadib duullaanka AMISOM ee Soomaaliya uusan xaqiijin hadafkii laga lahaa balse ay soo kordhiyeen burbur iyo dhibaato ka dhan ah shacabka muslimiinta halka kumanaan Askari laga dilay cadawga.
Shacabka Soomaaliyeed ayuu ku ammaanay mowqifka in badan oo kamid ah ka qaateen duullaanka halka dadka qaar ay ku jiraan xaalad ghaflad ah oo aysan u arkin cadaw!, shabaabul Mujaahidiin ayuu ku amaanay sida geesinimada leh oo ay cadawga jinsiyadaha kala duwan leh ee AMISOM ay uga yuraynayso Soomaaliya.
Halkan ka dhageyso Dr.Xanafi oo laga wareystay duullaanka AMISOM MP3
Ujeedkii ay beesha Caalamka ka laheyd maalgelinta ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa khasaaray oo waxay gabeen howshii loo igmaday oo aheyd in ay baabi’iyaan xarakada Shabaabul Mujaahidiin islamarkaana la waayay cunsur soomaali ah oo ku dhiirada iska caabinta ciidamada shisheeye balse dowladaha ay ciidamada AMISOM ka yimideen ayaa ku guuleystay in ay lacago malaayiin dollar ah ku qaataan wiilashooda lagu hurinayo dabka soomaaliya ka shidan iyana waxay waayeen kumanaan katirsan askartooda oo dagaallada lagu dilay.
Sanadihii 2012 illaa 2013 Ciidamada AMISOM waxay isku fidiyeen gobollada Sh/dhexe, Sh/Hoose iyo gobolka Bay balse sanaddii 2014 ayay dib ugurasho bilaabeen kadib markii ay xarakada Al Shabaab qaadday weeraro qorshaysan.
Sanaddii 214 Kumanaan katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya oo ku sugnaa magaalooyin ay kamid yihiin Baydhabo, Beled Weyne,Xudur iyo Garbahaareey ayaa loo geliyay shaatiga AMISOM! Kadib markii dhabarjab dusha loo saariyay soo duulayaasha Afrikaanta.
Itoobiya ayaa dalka kusoo daad guraysay kumanaan kun oo askari iyadoo ka faa’iidaysanayso ku biiristeeda dallada AMISOM, Addis Ababa waxay isku aragtay in ay tahay dowladda ugu ciidanka badan mandiqadda geeska Afrika islamarkaana soo gaba gabayn karta shabaabul Mujaahidiin si ay dhaqaala lixaad leh uga hesho caalamka!.
Kiis iska waalkii Itoobiya halka uu ku dambeeyay iyo weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee ciidanka AMISOM loogu geystay Soomaaliya waxaan kusoo gudbin doonaa insha’allaah Q.2-aad ee Warbixinada aan uga hadlayno 10 Sanadood Kadib Duullaankii AMISOM Maxaa uqabsoomay?